ကေ​ပေါ့ပ်​ချစ်​သူ​တွေကို ရည်းစား​တော်​ထားရင်​ သင်​သိထားသင့်​တဲ့အချက်​ ၁၀ ချက်​ - CantWait2Say
ကေ​ပေါ့ပ်​ချစ်​သူ​တွေကို ရည်းစား​တော်​ထားရင်​ သင်​သိထားသင့်​တဲ့အချက်​ ၁၀ ချက်​
​ကေ့​ပေါ့ပ်​ဂီတကိုမှ အရူးအမူး စွဲလမ်းတဲ့ ​ကေ့​ပေါ့ပ်​ချစ်​သူပရိသတ်​​၊ အမာခံဖန်​ကိုမှ ရည်းစား​တော်​ထားရင်​​တော့ ဒီအချက်​​တွေကမဖြစ်​မ​နေကိုသိထားသင့်​ပါတယ်​။ မဟုတ်​ရင်​​တော့ အရစ်​ခံ​နေရမှာကျိန်း​သေပါပဲ​နော်​။ ဖတ်​ရှုကြည့်​ပါဦး။ ​ကေ​ပေါ့ပ်​ချစ်​သူ​တွေကို ရည်းစား​တော်​ထားရင်​ သင်​သိထားသင့်​တဲ့အချက်​ ၁၀ ချက်​ ကိုတင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ရပါတယ်​။
​ကေ့​ပေါ့ပ်​ဂီတကိုမှ အရူးအမူး စွဲလမ်းတဲ့ ​ကေ့​ပေါ့ပ်​ချစ်​သူပရိသတ်​​တွေအချင်းချင်းဆိုတာ အပြင်​လူ​တွေနားမလည်​နို​င်​စွမ်းဘဲ သူတို့အချင်းချင်းမှ ​​​အပြန်​အလှန်​နားလည်​နိုင်​တဲ့ ဘာသာစကားတစ်​မျိုးရှိပါတယ်​။
Red Velvet အဖွဲ့ရဲ့သီချင်း​တွေဆိုရင်​ ကိုယ်​​တောင်​မသိလိုက်​ဘဲ နားထဲစွဲ၊ ပါးစပ်​ထဲစွဲပြီး​ မသိစိတ်​ထဲက​နေအလိုလို လိုက်​ပြီးရွတ်​ဆို​နေမိပါလိမ့်​မယ်​။ သီချင်းကိုနားမလည်​ရင်​​တောင်​မှ​ပေါ့။
ပါတီပွဲ​လေး၊ ​ပျော်​ပွဲရွှင်​ပွှဲ​တွေလုပ်​တိုင်းလဲ ​ကေ​ပေါ့ပ်​သီချင်း​တွေကိုသာဖွင့်​​နေတာ​တော့ ​ရှောင်​လွှဲရမှာမဟုတ်​ပါဘူး။
လက်​ထပ်​ပြီးတဲ့အခါ ​မွေးလာမယ့်​က​လေး​ကိုပါ သူတို့သိပ်​ကြိုက်​တဲ့အဆို​တော်​ရဲ့နာမည်​ကို​ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်​​နေပါလိမ့်​မယ်​။
Sugar ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်​​တော့မှ r ထည့်​ပြီးမ​ရေးတတ်​​တော့တာ​တွေ့ရမှာပါ။
ကမ္ဘာပတ်​လို့အပန်း​ဖြေခရီးထွက်​မယ်​ဆိုလဲ ကိုရီးယားကိုပဲ သွားဖြစ်​မှာကျိန်း​သေ​ပေါက်​ပါပဲ။
​သောကြာ​နေ့ဆိုရင်​​တော့ Music Bank ရုပ်​သံအစီအစဉ်​ကို ​သေချာ​ပေါက်​အတူတူလိုက်​ကြည့်​​ပေးရပါလိမ့်​မယ်​။
ကိုယ့်​​မွေး​နေ့ကိုသာ​မေ့ရင်​​မေ့​နေမယ်​၊ သူတို့သိပ်​ကြိုက်​တဲ့ Idol အဆို​တော်​​တွေရဲ့​မွေး​နေ့ကို​တော့ တစ်​သက်​လုံး​မေ့မှာမဟုတ်​ပါဘူး။
TWICE အဖွဲ့ရဲ့ပရိသတ်​​သာဖြစ်​လို့က​တော့ ဓာတ်​ပုံအယ်​လ်​ဘမ်​​တွေ၊ ထွက်​ထားသမျှ သီချင်းအယ်​လ်​ဘမ်​အကုန်​လုံးနဲ့ ကာဗာပုံ​တွေကို အမြဲဝယ်​​နေရတာနဲ့ပိုက်​ဆံပြတ်​​နေမှာ​သေချာပါတယ်​။
ဓာတ်​ပုံ​လေးမရိုက်​မိလိုက်​နဲ့၊ ရိုက်​မိတာနဲ့ လက်​နှစ်​​ချောင်း​ထောင်​ပြမယ်​၊ မဟုတ်​ရင်​လက်​​ညိုး၊လက်​မနဲ့ အသည်းပုံ​လေးလုပ်​ပြပါလိမ့်​မယ်​…Lol!!!
ကပေ့ေါ့ပျဂီတကိုမှ အရူးအမူး စှဲလမျးတဲ့ ကပေ့ေါ့ပျခဈြသူပရိသတျ၊ အမာခံဖနျကိုမှ ရညျးစားတျောထားရငျတော့ ဒီအခကျြတှကေမဖွဈမနကေိုသိထားသငျ့ပါတယျ။ မဟုတျရငျတော့ အရဈခံနရေမှာကြိနျးသပေါပဲနျော။ ဖတျရှုကွညျ့ပါဦး။ ကပေေါ့ပျခဈြသူတှကေို ရညျးစားတျောထားရငျ သငျသိထားသငျ့တဲ့အခကျြ ၁၀ ခကျြ ကိုတငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။
ကပေ့ေါ့ပျဂီတကိုမှ အရူးအမူး စှဲလမျးတဲ့ ကပေ့ေါ့ပျခဈြသူပရိသတျတှအေခငျြးခငျြးဆိုတာ အပွငျလူတှနေားမလညျနိုငျစှမျးဘဲ သူတို့အခငျြးခငျြးမှ အပွနျအလှနျနားလညျနိုငျတဲ့ ဘာသာစကားတဈမြိုးရှိပါတယျ။
Red Velvet အဖှဲ့ရဲ့သီခငျြးတှဆေိုရငျ ကိုယျတောငျမသိလိုကျဘဲ နားထဲစှဲ၊ ပါးစပျထဲစှဲပွီး မသိစိတျထဲကနအေလိုလို လိုကျပွီးရှတျဆိုနမေိပါလိမျ့မယျ။ သီခငျြးကိုနားမလညျရငျတောငျမှပေါ့။
ပါတီပှဲလေး၊ ပြျောပှဲရှငျပှဲတှလေုပျတိုငျးလဲ ကပေေါ့ပျသီခငျြးတှကေိုသာဖှငျ့နတောတော့ ရှောငျလှဲရမှာမဟုတျပါဘူး။
လကျထပျပွီးတဲ့အခါ မှေးလာမယျ့ကလေးကိုပါ သူတို့သိပျကွိုကျတဲ့အဆိုတျောရဲ့နာမညျကိုပေးဖို့ ဆုံးဖွတျထားပွီးသားဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
Sugar ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယျတော့မှ r ထညျ့ပွီးမရေးတတျတော့တာတှရေ့မှာပါ။
ကမ်ဘာပတျလို့အပနျးဖွခေရီးထှကျမယျဆိုလဲ ကိုရီးယားကိုပဲ သှားဖွဈမှာကြိနျးသပေေါကျပါပဲ။
သောကွာနဆေို့ရငျတော့ Music Bank ရုပျသံအစီအစဉျကို သခြောပေါကျအတူတူလိုကျကွညျ့ပေးရပါလိမျ့မယျ။
ကိုယျ့မှေးနကေို့သာမရေ့ငျမနေ့မေယျ၊ သူတို့သိပျကွိုကျတဲ့ Idol အဆိုတျောတှရေဲ့မှေးနကေို့တော့ တဈသကျလုံးမမှေ့ာမဟုတျပါဘူး။
TWICE အဖှဲ့ရဲ့ပရိသတျသာဖွဈလို့ကတော့ ဓာတျပုံအယျလျဘမျတှေ၊ ထှကျထားသမြှ သီခငျြးအယျလျဘမျအကုနျလုံးနဲ့ ကာဗာပုံတှကေို အမွဲဝယျနရေတာနဲ့ပိုကျဆံပွတျနမှောသခြောပါတယျ။
ဓာတျပုံလေးမရိုကျမိလိုကျနဲ့၊ ရိုကျမိတာနဲ့ လကျနှဈခြောငျးထောငျပွမယျ၊ မဟုတျရငျလကျညိုး၊လကျမနဲ့ အသညျးပုံလေးလုပျပွပါလိမျ့မယျ…Lol!!!
Funny : How to train your cow ?
Chris Evan ကိုလူကြိုက်များရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းများ
ပရိသတ်တွေကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေတဲ့ Spider-Man မင်းသား Tom Holland …
ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရဦးမယ့် Harley Quinn Solo Movie “Birds …